လင်္ကာ: ကြွေလွင့်ခဲ့သော ကြယ်ပွင့်များအားတိုင်တည်ခြင်း
by Nang Aung Htwe Kyi on Saturday, 11 February 2012 at 13:49 ·
၁၉၉၂ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၂ ရက် (ပြည်ထောင်စုနေ.) တွင် ABSDF (NB) တွင် ရက်စက်စွာ ညှင်းဆဲသတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသော ကိုထွန်းအောင်ကျော်နှင့် ရဲဘော်များအား ရည်စုး၍...
ကြွေလွင့်ခဲ့သော ကြယ်ပွင့်များ အား တိုင်တည်ခြင်း
ကိုကြီးရေ ဒီနေ.နှစ် ၂၀ ပြည့်ခဲ့ပြီ မငယ်တစ်နေ့ မှ မေ့မရပါဘူး၊ ကိုကြီးနဲ့ဂီတအကြောင်းတွေ ပြောခဲ့ပြီး အတူတီးခဲ့ ဆိုခဲ့ကြတာတွေကို သတိရနေဆဲပါ။ ဂစ်တာတီးပြီး ကြွေရဲသောကြယ်များ သီချင်းဆိုမိတိုင်း မငယ်ငိုခဲ့မိတာကြောင့် ဂစ်တာမကိုင်ဖြစ်တာ Australia ရောက်ကထဲကပါ။
မှတ်မိသေးတယ် ကိုကြီးမငယ်ကို ဘဏ္ဍာရေးသင်တန်းတက်ခိုင်းတော့ မငယ်ကို တီးတိုးပြောခဲ့တယ် မငယ် မင်းငါ့ကို မျက်နှာငယ်အောင် မလုပ်နဲ့ နော် KIA ကြားမှာ ကျောင်းသားတပ် သိက္ခာတက်အောင်လုပ်။ မငယ် ကလဲ “ဟုတ်ကဲ့ လို့ဆိုခဲ့တယ် ။ မိဘလက်ထက်မှာ ၁၀ တန်းကို အောင်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်ဖြေဆို လာခဲ့တဲ့ မငယ်ဟာ ကိုကြီးကို ကြည့်ပြီး အင်းပါလို့ပြောခဲ့တယ်။ မငယ်ကတိ တည်ပါတယ်နော်အဲဒီသင်တန်းမှာမငယ်ဆုရခဲ့တယ်လေ။ကိုကြီးကမငယ်ကို ပြုံး ကြည့် ပြီးပြောတယ်ဂုဏ်ယူတယ်တဲ့။ယူနီဖေါင်းတောင်အသစ်တစုံရလိုက်သေး တယ်။
မှတ်မိသေးတယ်။ ABSDF (NB) ရဲ. မိုင်းဖေါက်ခွဲရေး သင်တန်းကို မငယ်ကို တက်ရောက်သင်စေဖို. ရွေး ချယ်ခဲ့ပြန်တယ်။ မင်းကစိတ်ငြိမ်ပြီး အာရုံစူးစိုက်မှုရှိတယ်။ အန္တရာယ်ကြီးတဲ့သင်တန်း ဒါပေမယ့် မင်းကို ယုံကြည်တယ် ကောင်းကောင်းသင်တဲ့။ မငယ်လဲ ကောင်းကောင်းသင်ယူခဲ့ပါတယ်။ သူများထောင်တဲ့မိုင်းကို မငယ်ကျော်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် မငယ်ထောင်တဲ့မိုင်းကို မောင်မောင်ကြွယ်ထိသွားလို့ပြစ်ဒဏ်အနေနဲ့အရိုက်ခံ လိုက်ရသေးတယ်။ အဲဒီဖောက်ခွဲရေးသင်တန်းနောက်ဆုံးနေ့ မှာပဲ မငယ်အဖမ်းခံခဲ့ရတယ်လေ။
မှတ်မိသေးတယ်။ မငယ်တို့ အားလုံး အဖမ်းခံရပြီး Ronald အောင်နိုင်နဲ့မျိုးဝင်းတို. အဆိပ်တွေ ထုတ်ခိုင်း တာ ဘယ်သူမှ မထုတ်ပေးနိုင်တော့ မငယ်တို့ ကို လက်ဖြတ်ဖို့ လုပ်တဲ့နေ့ လေ၊ မငယ်တို့အားလုံးရဲ့လက် မှာ ယမ်းပျော့တွေချည်ထားပြီး ရော်နယ်အောင်နိုင်တို့ က သူတို့ လိုချင်တာတွေ ထုတ်မပေးရကောင်း လား ဆိုပြီး ကိုကျော်ဝေလက်ကို မိုင်းခွဲပြီးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ကိုကြီး၊ ကိုရဲလင်းနဲ့မငယ်တို့ အားလုံး တောင်းပန် ကြတော့မှ နောက်ထပ်အချိန်တပတ်ခွင့်ပေးပြီး မငယ်တို့ ကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခိုင်းတဲ့နေ့ လေ၊ အဲဒီနေ့ ဟာ ဒီနေ့ အတွက် သမိုင်းဝင်မယ့်နေ့ တစ်နေ့ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်ခဲ့ရတယ်ကိုကြီး၊ ဆွေးနွေးပွဲမှာ အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ ကိစ္စတွေကို တစ်ယောက်တစ်ပေါက်ပြောဆိုနေကြပေမယ့် အားလုံးဟာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ကြည့်ပြီး ငါလဲမင်းလိုပဲဆိုတဲ့ အသိနဲ့အော် ဒုက္ခ ဒုက္ခ ဘယ်လိုမှ အဖြေရှာမရဖြစ်နေချိန်မှာ ကိုကြီးက မငယ် နားရောက်လာပြီး မငယ်ကို လက္ခဏာတောင်းကြည့်တယ်လေ၊ အဲဒီမှာ ကတိဆိုတာ ဖြစ်ခဲ့တာပေ့ါ၊
မှတ်မိသေးတယ်၊ ကိုကြီးကပြောတယ် မငယ်မင်းမသေနိုင်ဘူး မင်းလွတ်သွား လိမ့် မယ် မင်းမှာ ဥပစ္ဆေဒကကံ မပါဘူး။ မင်းလက္ခဏာမှာ ထူးခြားချက်ရှိတယ်။ တစ်နေ့ မင်းငါတို.အားလုံးရဲ့သမိုင်းကိုပြောပေးနော်တဲ့။ မငယ်က ကိုကြီးအခု လက်မှာ မိုင်းချည်ထားတဲ့ သူတွေကို ကြည့်လိုက် အားလုံးအသတ်ခံရမယ့်သူတွေ မငယ်လဲသေမှာပဲဆိုတော့ မင်းသစ္စာဆိုပါတဲ့ အသုံးမကျတဲ့ကျမ ဘုရားမှာ သစ္စာ မဆိုတတ်လို့မငယ်ပါဠိလို မသိဘူးဆိုတော့ ကိုကြီကပြုံးပြီး မလိုဘူးလေ။ ကိုယ် ဟုတ်ရင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးပေါ့တဲ့ဘုရားကိုတိုင်တည်ပါတဲ့ ဆိုတော့ မငယ်လဲ ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးလို. ကတိပေးမိပြန်တယ်နော်။ ကိုကြီးရေ တကယ်ပဲ မငယ်သေဒဏ်ထဲမှာ ပါခဲ့ပေမယ့် နောက်ဆုံးစက္ကန့် မှာ မငယ်လွတ်ခဲ့ တယ်၊ မငယ် ကိုသတ် ဖို့ တောင် ဆွဲထူပြီးပြီ။
ကိုကြီးရေအချိန်ကာလနှစ်၂၀အထိစောင့်စားခဲ့ရတာခွင့်လွတ်ပါ။နိုင်ငံရေးကိုပြန်ကြည့်တော့ဒေါ်စုလဲ မ လွတ် သေး၊၈၈ခေါင်းဆောင်များနဲ့နိုင်ငံရေးသမားများလဲ အထဲမှာ အကျဉ်းချခံနေရဆဲ၊ မငယ်တို့ လို ထောက် လှမ်းရေးလို့ အစွပ်စွဲခံပြီး အနှိပ်စက်ခံထားရတဲ့ ကိုရဲလင်း၊ ဘိုဘို၊ ထိန်လင်း၊ မိုးကြီး၊ ရာပြည့် စသော မြောက်ပိုင်းမှ ကျောင်းသားများလဲ စစ်အစိုးရကို ဆန့် ကျင်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ် (၇) နှစ်နဲ့ အနှစ် ၂၀ ချ ခံ ထားခဲ့၇တယ်။ သူတို့ မျက်နှာတွေကို ထောက်ရှုပြီး မငယ်မြိုသိပ်ထားခဲ့ရတာပါ။
လွတ်လပ်တဲ့ တိုင်းပြည်မှာနေနေရပြီး ငါ့စိတ်တွေ အကျဉ်းကျနေတဲ့ဟာလို့ ထိန်လင်းအင်္ဂလန်ရောက်ခါစက မငယ်သူ့ ကိုဖွင့်ပြောခဲ့တယ်၊ ကတိပေးထားပြီ အကေါင်အထည်မဖေါ်ဖြစ်လို. တစ်ခါတရံအိပ်မက် ဆိုးမက်တယ်။ အိပ်မက်မက်ပြီးတိုင်းငိုရလို. တညလုံးမအိပ်နိုင်ပဲ မိုးလင်းခဲ့ရတဲ့ ညတွေအများကြီး ရှိခဲ့တယ် ကိုကြီး။
ကိုကြီးရေ ရောက်ရာနေရာက ကြည့်လိုက်ပါနော်၊ ABSDF (NB) ကျောင်းသားများပြုလုပ်တဲ့ပွဲကို ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ တက်ရောက်ဆုတောင်း အမျှဝေခဲ့ကြပြီး ကိုကြီးရဲ. အထက်မြန်မာပြည်ဗကသမျိုးဆက်သစ်တွေနဲ. မြောက်ပိုင်းကျောင်းသားဟောင်းတွေလက်တွဲပြီး ပြည်တွင်း မှာ အမှန်တရားအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြပြီ။ ပြည်ပမှ မကဒတရဲဘော်ဟောင်းတွေနဲ. ပြည်တွင်းမှ မိဘပြည် သူတွေလဲ ၀မ်းနည်းစွာဖြင့် ဆုတောင်းမှုတွေ ပြုနေကြပြီ။
ကိုကြီးရေမပြီးဆုံးသေးပါဘူး၊ ပြီးဆုံးတဲ့နေ့ အထိ မငယ်တို့ အားလုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကတိ ထပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုကြီးတို့ အတွက်ကုသိုလ်ပြုအမျှဝေသံကြားရင်သာဓုခေါ် ကြပါ။
ကိုကြီးထွန်းအောင်ကျော်နှင့်တကွABSDF မြောက်ပိုင်းတွင်ကျဆုံးခဲ့သောသူများကောင်းရာသုဂတိလား ကြပါစေ။ ၀ိညာဉ်များလွတ်မြောက်ကြပါစေ။ ဘ၀ဆက်တိုင်း ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုး၊ စနစ်ဆိုးမျိုး နဲ့ မကြုံတွေ့ ရ ပါစေနဲ့ လို့ ဆုတောင်းမေတ္တာပေးပို့လျက်....
နန်းအောင်ထွေးကြည် ( မငယ်)
Nang Aung Htwe Kyi facebook မှကူးယူဖော်ပြသည်။
Kyaw Gyi AB ဒီစာလေးကို မန္တလေးပွဲ မှာကြားရတယ် ၊ကိုကြီးညီ ကိုလတ်က အိမ်မှာ မှတ်မိသမျှ ပြောပြတော့ ကိုကြီးအမေ (အံတီမ) ကအဲဒီ ကလေးမလေး မြန်မာပြည်ရောက်ရင် အမေတွေ့ ချင်တယ်တဲ့ ခေါ်ခဲ့ပါ ၊ အမေ စကားပြောချင်ပါတယ်တဲ့